Maitiro Ekuchinjisa iTunes Raibhurari kune Imwe Computer | IPhone nhau
Maitiro ekuchinjisa iTunes raibhurari kune imwe komputa
Pablo Aparicio | | iTunes, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Kana iwe uri vanoda mimhanzi zvine musoro kuti une raibhurari yemultimedia zvakarairwa zvakanaka nevanyori, marekodhi, mazuva, nezvimwe. Asi ko kana isu tikamomesa komputa kana tichida kuendesa raibhurari yedu yese kune imwe komputa? Zvinogona kuva hope dzehusiku kuti utange kubva pakutanga.
Kune zvakaipa zvakakura, mishonga mikuru. iTunes inotibvumidza kuendesa raibhurari kune chero Windows kana Mac komputa ine mashoma matanho akareruka, kuti raibhurari yedu igare ichiuya nesu uye ichagara iri yepamusoro-uye yakarongeka zvakakwana. Muchirongwa chinotevera isu tinokudzidzisa iwe maitiro ekuchinjisa yedu yese iTunes raibhurari kune imwe komputa.
1 Maitiro ekuchinjisa raibhurari yeTunes kune imwe komputa
1.1 Pakombuta yedu yekare
1.2 Pakombuta yedu nyowani
Maitiro ekuchinjisa raibhurari yeTunes kune imwe komputa
Dzidzo inotevera inoitwa yeMac makomputa, asi iyo sisitimu yakafanana neWindows makomputa. Musiyano uri mudanho rekupedzisira, Windows iine yayo nzira yakasarudzika kupfuura nzira yaMac.
Pakombuta yedu yekare
Isu tinovhura iyo Tsvaga uye toenda kune folda mumhanzi. Tichaona dhairekita inonzi iTunes.
Isu tinoteedzera iyo iTunes folda pane USB kana yekunze hard drive. Zvinopera pasina kutaura kuti kugona kweUSB kana dhisiki rekunze rinofanira kuve rakakura kupfuura saizi yeraibhurari yedu.
Pakombuta yedu nyowani
Isu tichangoita nenzira yakapesana yatakaita pane yekare komputa.
Isu tinobatanidza yedu yekunze disk kana USB mukombuta nyowani.
Isu tinofamba tichienda kufolda ine iyo iTunes folda takabva pakomputa yedu yekare.
Isu tinoteedzera iyo iTunes folda mukati meMusic folda.
Uye ndizvozvo. Ini ndinoita maitiro aya pese pandinoita kuiswa kwakachena kweOS X. Zvese zvaunofanirwa kuita kuve nekutsungirira zvishoma zvichienderana nesaibhurari yako (mune yangu mazana emagigabytes). Pakutanga uye nevamwe vatambi, ndaifanira kuodha zvekare raibhurari yangu pese pandaifanirwa kuiendesa kune imwe komputa, asi iTunes inondibvumidza neaya matanho akareruka kuti ndive neraibhurari inogara ichivandudzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » iTunes » Maitiro ekuchinjisa iTunes raibhurari kune imwe komputa
Ko kana ndikachengeta iyo iTunes raibhurari pane yekunze dhisiki inoshanda zvakafanana? Mafoni, nezvimwe zvinogona kuwiriraniswa here?
Hongu, muchokwadi, ndine maraibhurari maviri, imwe paHD uye imwe (ine mabhaisikopo) pane yangu yekunze dhiraivha. Chinhu chakashata ndechekuti kubvunza disc rakaparadzana, zvinonzwa zvishoma zvishoma (zvakajairika: zvinotanga kutenderera, nezvimwewo). Chaunofanirwa kuita mune iyoyo kesi kutanga iTunes ne ALT kiyi yakadzvanywa (Ndiri kutaura nezve Mac, ndinofungidzira kuti muWindows iri SHIFT) uye sarudza raibhurari yatinoda.
Podcasts inotsigirwawo here?
iyi nzira inoponesawo "nyeredzi" uye kuverenga kuverenga?
Ini handina 100% chokwadi, asi ini ndingati hongu. Imwe yenziyo dzandakanyanya kunzwa ndeyekuti ndakarara nayo pachiuno (xD) uye handina kumbozvinzwa kunze kwenguva iyoyo. Dzinoda kusvika ka300 nguva dzandakaverenga ndingangoti dzaivepo kubva ipapo uye ini ndakaisa Yosemite OS X kubva pa0.
Pedro Arenal akadaro
Ndine muunganidzwa wema cd's mune yakasarudzika partition yeiyo hard disk. Pandinodzoreredza windows OS ndinofanira kunyoresa ese ma disks zvakare. Iwe haugone kuteedzera danda kana chimwe chinhu chakafanana uye kurodha raibhurari zvakare.
Pindura Pedro Arenal
Manheru akanaka. Ndine urombo, asi handisati ndamboshandisa iTunes paWindows. PaMac ndinovhura iTunes nekiyi ALT yakadzvanywa uye zvinondibvumidza ini kusarudza raibhurari yandinoda. Edza zvakafanana muWindows nekiyi SHIFT kiyi (ini handizive kana ichizokutendera iwe kusarudza raibhurari).
CarPlay iOS kana maitiro ekuita CarPlay mumotokari dzese
5 maapplication ayo asingakwanise kushayikwa pane yako iPhone muzhizha 2015